Siilaanyo Iyo Faysal Oo Labaduba Ku Silbaday Waraysi Uu Ka Qaaday Wariye Cawke. by Cabdlilaahi Xaaji Saciid « SAWNEWS NETWORK
« Maryan Mursal oo maanta dhagax dhigtay dugsigii ay ballanqaaday inay ka dhisayso Hargeysa
Roob Lagu Diirsaday oo Ka Da’ay Borama iyo Duleedkeeda »
Siilaanyo Iyo Faysal Oo Labaduba Ku Silbaday Waraysi Uu Ka Qaaday Wariye Cawke. by Cabdlilaahi Xaaji Saciid
Waraysi aad u xiisabdan oo marka aad u fiirsato u muuqday qaab doodeed, ayaa waxa uu Wariye Cawke la yeeshay , Madawxwaynaha Jamhuuriyada Somaliland , iyo labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka Faysal Cali Waraabe , Iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo. (HALKAN KA DHAGEYSO)Waraysigan oo qaabkiisa oo kale inta badan aan laga adeegsan gayiga Soomaalida ayaa waxa uu ahaa mid uu wariye Cawke ku wareysanaayay sedexda hogaamiye iyagoo kala maqan oo an is ogayn is la markaana uu sedexdaba ku waydiinayay su’aala isku mid ah. Waxayna inta badan kala bixinayeen jawaabo aad u kala fog.
Su’aaluhu waxa ay ka koobnaayeen nuucyo fara badan oo iskugu jira kaftan siyaasad iyo kuwa kalaba. Haddaba su’aalaha ay labadan hogaamiye ku rafteen , waa Faysla iyo Siilaanyee waxay ahaayeeen su’aalihii ku sahabsanaa dhinaca siyaasada . Hal su’aal oo isku mida oo labada hogaamiye neefta ku dhajisay oo ay ka jawaabi kari waayeen ayaa waxa ahayd sida tan ” Mudane gudoomiye sanadkii hore waxa aad la tartamayseen labadan nin ee hada aad la tartamaysaan oo idinka bidiyay , adiga waxa ku xigeen kuu ahaa Cabdiraxmaan Awcali faarax waa Siilaanya e , Faysal adigana waxa ku xigeen kuu ahaa Dr. Ahmed Hadaba su’ aasha dadbadan is waydiinayaan waxa ay tahay maxa nimankan iyaga kaligood soo ceshay oo ka reebay labadii gudoomiye ku xigeen ee markii hore ku lamaanaa maadaama ay wada guuldaraysteen, miyaan la odhan karin waa cadaalad daro?.
Maxay kaga jawaabeen bal hadaba aanu ku horayn Faysal. Faysal intuu xoogahaa yara aamusay ayaa yidhi Dr. Ahmed baarlamankuu galay !!!!! inta uu cawke qoslay buu dib ugu ceshay Su’aal kale oo ah .Haduu Dr. Ahmed baarlamanka galay miyay ka manicnaysaa inuu madaxwayne ku xigeen isku sharaxo ? Faysal isaga oo xishood ka muuqdo ayuu hadana ku jawaabay maya ee isagaa ka tanaasulay .
Siilaanyo jawaabta uu su’aashan ka bixayay ayaa ahayd mid dheer oo aan hadana micno sidaasi ubadani ku jirin , Waxana hadaladiisii ka mid ahaa ” Cabdirahmaan awcali waanin aan ixtiraam farabadan aan u hayo oo dalkoo dhana laga qadariyo oo sharaf leh , inbadana aan halganka kusoo wada jirnay , Wuxuuna hadalkiisii kusoo afmeeraray isagoo carabka iyo laan gadhaxa ka la dhawraya ” waxa laga yaabaa in ay sal ku leedahay arintani duruufo ka jira deegaanka ay ka soo wada jeedaan raga u sharaxnaa jagada madaxwayne ku xigeenka kulmiye”. Waxaanad hadalkiisa ka dhadhan sanayse inuu u jeedo Cabdiraxmaan Awcali wuxuu ka soo jeedaa beesha Rayaale markaa beesha rayaalana waxay ubadantahay Udub.
Marka laga gudbo Su aalaha siyaasada waxa la waydiiyay hogaamiyayaasha su aalo kaftan ubadan oo ay intooda badan jawaabo isku mida ay ka bixeen waxaana ka mid ahaa . Imise xaas ayaad leedahay ? sedexduba waxay ku jawaabeen xaas kaliya . Ma xaaskii kuugu horeeyaybaa ? Sidoo kale sedexduba waxay ku jawaabeen haa waa tii iigu horaysay oo micnaheedu yahay maan guursan xaas kale. Music ama heesa ma dhagaysataa? hadaad dhagaysato heesteed u jeceshahay ? Sedexduba waxay sheegeen inay dhagaysan jireen ayna jecelyihiin , laakiin hada waqti la aan awgeed aanay haleelin inta badan . Su aasha kale ee taasi daba socotay ayaa ahayd ciyaaraha ama isboortiga sideed isku tihiin ? sedexduba waxay ay sheegeen inay soo ciyaari jireen . M/Rayaale waxa uu sheegay inuu ciyaari jiray kubada kolayga ama baaskidka , Halka siilaanyo uu sheegay inuu ciyaari jiray kubada cagta uuna kabtan u ahaa xiligii dugsigiisii sare koox cadan u tagtay ciyaaro. Faysal isaga laftiisu waxa uu sheegay inuu ciyaari jiray kubada teniska .
Midabada midabkeed jeceshahay ? Madaxwayne rayaale iyo Siilaanyo ayaa halkaa iskaga dhawaa oo labaduba sheegay midabka buluuga , halka uu Siilaanyo ka sheegay in buluuga uu usoo raaco akhdar , ayuu Madaxwayne rayaalana ka raaciyay waxa buluug ii soo raaca cadaan. Faysal isagu waxa uu sheegay inuu jecel yahay dharka saafiga ah ee aan barbarta lahayn.
Su aasha kalee ee xiisaha badnayd ayaa ahayd hadii doorashada soo socota la inaga guulaysto miyaad banaynaysaan jagada gudoomiyaha xisbiga mise waad ku sii fadhiyaysaan ? Sedexda hogaamiyaba waxa ay balan qaadeen in ay ka dagi doonaan jagada gudoomiya nimada hadii laga guulaysto. Waxa su aashaasi daba taalay su aal kale oo ahayd hadii aad ku guulaysato doorashada ma furi doontaa xisbayo kale ? M/Rayaale oo markiiba lasoo booday su aashan jawaabteeda ayaa ka shan qadhiyay in ayna qorshaha ugu jirin in uu xisbi kale faro , isagoo sheegay in 60kii la eeday xisbiyadii badnaa ee ardaa waliba xisbi furanaayay sidaad darteedna uuna u socon hada in uu xisbi kale furo , waxa kalow Madaxwaynuhu intaa ku daray in dunidaba marka aad u fiirsato ay xisbayadoodu kooban yihiin isagoo tusaale usoo qaatay dalka maraykanka oo uu sheegay inay leeyihiin laba xisbi oo kaliya. Faysal cali waraabe isna su aashan waxa uu kala sinaa M/Rayaale wuxuuna sheegay in hada aan loobaahnayn in xisbiyo kale la furay isagoo intaasi ku daray in arinkaasi uu shacabka u yaalo oo haday iyaga ka soo go do la fulin doono. Siilaanyo isagu waxa uu toos u balan qaaday inuu furi doono xisbiyo kale.
Ugu danbayntii kama gaadhno inaan dhamaan soo qaadano su aalihii la waydiiyay hogaamiyayaasha , laakiin marka aad u kuur gasho ee aad dhuuxdo jawaabaha ay bixiyeen sedexda hogaamiye waxa kuu soo baxaysay in xoogahaa kalsooni daro ka muuqatay hogaamiyayaasha mucaaradka maadaama su aalo farabadan oo la waydiiyay ayna uga jawaabi sidii la rabay.
Cabdlilaahi Xaaji Saciid
This entry was posted on June 16, 2009 at 5:30 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.